Iiresiphi Okunye Iimveliso Uphononongo Lweemovie Iindlela Izixhobo Ukulungiswa Kwangoko Amanqaku Omfazi Ombane Ekhaya Imisebenzi Kunye Nemali
Siyabuxabisa ubumfihlo bakho.
Le webhusayithi iya kugcina ulwazi malunga nokhetho lwakho kwikhompyuter yakho ngaphakathi kwifayile encinci ebizwa ngokuba yicookie. Icookie sisiqwengana sedatha ethi iwebhusayithi ibuze umkhangeli wakho ukuba ayigcine kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo. Icookie ivumela iwebhusayithi ukuba ikhumbule izenzo zakho okanye izinto ozikhethayo ngokuhamba kwexesha.
Ungazicima zonke iicokies esele zikwikhompyuter yakho, kwaye unokuseta uninzi lwebrawuza ukunqanda ukubekwa kwazo. Nangona kunjalo, ukuba uyakwenza oku, kuya kufuneka uhlengahlengise izinto ozikhethayo ngalo lonke ixesha undwendwela indawo, kwaye ezinye iinkonzo kunye nokusebenza kunokungasebenzi.
Uninzi lweebrawuza zixhasa ii-cookies, kodwa ungacwangcisa isikhangeli sakho ukuba sizenqabe kwaye singazicima nanini na ufuna. Ungayifumana imiyalelo Apha ngendlela onokuyenza ngayo kwizikhangeli ezahlukeneyo.
Le webhusayithi isebenzisa ikuki ukwenza:
1) Chonga njengomsebenzisi obuyayo kunye nokubala utyelelo lwakho kuhlalutyo lweenkcukacha manani
2) Khumbula ukhetho lwakho lokubonisa ngokwesiko (njengokukhetha izimvo ukubonisa konke okuwile okanye hayi)
4) Nika ezinye izinto zokusebenziseka, kubandakanya ukulandela umkhondo ukuba sele uyinike imvume yakho ikuki
Ukwenza iikuki akuyomfuneko ngokungqongqo ukuba iwebhusayithi isebenze kodwa iya kukubonelela ngamava abhetele okukhangela.
Ulwazi olunxulumene necookie alusetyenziswanga ukukuchonga buqu kwaye alusetyenziselwa nayiphi na injongo ngaphandle kwale ichazwe apha.
Kukho ezinye iintlobo zekhukhi ezenziwe emva kokuba undwendwele le webhusayithi. Le ndawo isebenzisa uGoogle Analytics, inkonzo eyaziwayo yokuhlaziya iwebhu esebenzisa ikuki ukunceda ukuhlalutya indlela abasebenzisi abayisebenzisa ngayo le ndawo. Ulwazi oluveliswe yicookie malunga nokusebenzisa kwakho le webhusayithi (kubandakanya idilesi ye-IP) ziya kudluliselwa zize zigcinwe nguGoogle kumaseva aseMelika. UGoogle uya kusebenzisa olu lwazi ngenjongo yokuvavanya ukusebenzisa kwakho enye iwebhusayithi, ukuqokelela iingxelo kwimisebenzi yewebhusayithi, kunye nokubonelela ngezinye iinkonzo ezinxulumene nomsebenzi wewebhusayithi kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi. UGoogle angadlulisela olu lwazi kubantu besithathu apho kufuneka benze njalo ngokomthetho, okanye apho abantu besithathu baqhubekeka ulwazi egameni likaGoogle. UGoogle akazibopheleli ekungadibaniseni idilesi ye-IP nayo nayiphi na idatha egcinwe nguGoogle.
Le ndawo ineenkampani zentengiso zomntu wesithathu ezihambisa iintengiso kuwe xa undwendwela. Ezi nkampani zingagcina ulwazi malunga notyelelo lwakho apha nakwezinye iiwebhusayithi ukuze zikunike iintengiso ezifanelekileyo malunga neempahla kunye neenkonzo. Umzekelo, ukuba bayazi ukuba zeziphi iintengiso oziboniswayo xa undwendwela le ndawo, banokuqiniseka ukuba bangakubonisi ezifanayo.
Ezi nkampani zinokusebenzisa ii-cookies kunye nezinye izinto zokuchonga ukuqokelela ulwazi olulinganisa ukusebenza kweentengiso. Olu lwazi alubonakalisi ngokobuqu ngaphandle kokuba, umzekelo, ubabonelela ngolwazi olufumanekayo kubo ngentengiso okanye umyalezo we-imeyile.
Abadibanisi unxibelelwano lwakho kunye neendawo ezingadibaniyo nesazisi sakho ekuboneleleni ngentengiso esekwe kumdla.
Le ndawo ayinikezeli naluphi na ulwazi lomntu kubathengisi okanye kwiindawo zangaphandle. Abathengisi kunye nabanye abantu besithathu (kubandakanya uthungelwano lweentengiso, iinkampani ezenza iintengiso, kunye nabanye ababoneleli beenkonzo abanokuthi basebenzise) banokucinga ukuba abasebenzisi abanxibelelana okanye abacofa kwintengiso eyenzelwe wena okanye umxholo bayinxalenye yeqela intengiso okanye umxholo ijolise ngqo (umzekelo, abafundi kwiPacific Northwest abafunda iintlobo ezithile zamanqaku). Kwakhona, ezinye ii-cookies zomntu wesithathu zinokubonelela ngolwazi malunga nawe (ezinje ngeendawo oboniswe kuzo iintengiso okanye ulwazi lwedemokhrasi) ezivela kwimithombo engaxhunyiwe kwi-intanethi nakwi-intanethi abanokuyisebenzisa ukukunika intengiso efanelekileyo kunye noluncedo.
Ukufunda ngakumbi malunga nokhetho onalo malunga nokuthintela ukuqokelelwa kolwazi ngamanethiwekhi omntu wesithathu, ungajonga kwiwebhusayithi Iphulo lokuThengisa iNethiwekhi .
Unokukhetha ukuphuma ekuthatheni inxaxheba kuthungelwano lwentengiso olusekwe kumdla, kodwa ukuphuma akuthethi ukuba awusayi kuphinda ufumane intengiso kwi-Intanethi. Oko kuthetha ukuba iinkampani okhethe ukuphuma kuzo azisayi kuphinda zenze intengiso ngokusekwe kwiminqweno yakho kunye neepatheni zokusebenzisa iwebhu zisebenzisa itekhnoloji esekwe kwicookie.
Eli nxuwa lidibene neCMI Marketing, Inc., d / b / CafeMedia (CafeMedia) ngeenjongo zokuba ukubeka intengiso kwiSayithi , kunye neCafeMedia iya kuqokelela kwaye isebenzise idatha ethile ngeenjongo zentengiso. Ukuze ufunde okungakumbi ngokusetyenziswa kwedatha yeCafeMedia, cofa apha www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-mgaqo-nkqubo
Le ndawo ayithengisi, ayiqeshisi, okanye ayityhileli amaqela angaphandle ulwazi oluqokelelwe apha, ngaphandle kwale ilandelayo:
(a) Abanikezeli beenkonzo abaManyeneyo: Esi siza sinezivumelwano nabanikezeli beenkonzo abahlukeneyo ababandakanyekayo ukulungiselela ukusebenza kwesiza. Umzekelo, indawo inokwabelana ngolwazi lwekhadi lakho letyala kunye nomnikezeli wekhadi letyala ukuze uqhubekeke ukuthenga kwakho. Bonke ababoneleli beenkonzo zolawulo abasebenzisa le ndawo bayacelwa ukuba babenenqanaba elifanayo lokhuseleko lwabucala njengoko le ndawo isenza, kwaye ke ulwazi lwakho luya kuphathwa ngenqanaba elifanayo lokhathalelo. Ukongeza, umzekelo, le ndawo inokusebenzisa uhlalutyo okanye iinkonzo zentengiso ezinje ngeGoogle Analytics, Google Adsense, Taboola, okanye RevContent, apho uqokelela khona uvuma ngaphandle kwemeko.
(b) Apho kufunwa ngumthetho: Esi siza sinokwabelana ngolwazi oluqokelelweyo apho lifunwa ngumthetho, ngakumbi ukuphendula ibango kumagunya karhulumente apho loo mfuno ihlangabezana neemfuno zomthetho.
(c) Uhlalutyo lweenkcukacha manani: Le ndawo inokwabelana ngeNgcaciso engeyiyoNgcaciso kunye nolwazi oluhlanganisiweyo kunye nomntu wesithathu, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwintengiso okanye ngeenjongo zokuthengisa. Akukho nkcukacha zobuqu ziya kwabelwana ngale ndlela.
(d) Iitransekshini: Ngokunxulumene, okanye ngexesha lothethathethwano lwako nakuphi na ukudityaniswa, ukuthengiswa kwempahla yenkampani, ukuxhaswa ngemali okanye ukufunyanwa, okanye kuyo nayiphi na enye imeko apho iiNkcukacha zobuqu zinokuvezwa okanye zidluliselwe njengempahla yeshishini.
Ukhetha njani ukuphuma kwintengiso esekwe kumdla
Ukukhetha ukuphuma kwiiNkonzo zeNtengiso esekwe kuMdla Le webhusayithi lilungu le Iphulo lokuThengisa iNethiwekhi (NAI) kwaye ibambelela kwiNdlela yokuziPhatha ye-NAI njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi ye-NAI. Le webhusayithi ibambelela kwimigaqo yeDigital Advertising Alliance (DAA). Inkcazo yeNkqubo yeDAA, nceda undwendwele Iwebsite yeDAA .
Ukukhetha ukuphuma kwintengiso esekwe kuMdla ngamaQela esiThathu Ukufumana okuninzi malunga nentengiso esekwe kumdla kwi-intanethi kunye nendlela yokuphuma ekuqokeleleni ulwazi ngale njongo ziinkampani ezithatha inxaxheba kwiNkqubo yoThengiso lweNethiwekhi okanye kwiDigital Advertising Alliance, ndwendwela Iphepha lokuphuma le-NAI okanye Iphepha lokukhetha abathengi leDAA .
Izigaba Ukuhla Ukusinda Iinto Zokuzilungisa Ulwazi Kunye Nemfundo
Iifilimu zeHalloween zabantwana
UJohn cena kunye nenkosikazi yakhe ifoto
isoda yokubhaka isikhumba esimhlophe
indlela yokunciphisa inkwethu kunye nokuwa kweenwele
eyona nto ilungele iinwele ezigobileyo
Unyango lwasekhaya lokulahleka kweenwele kubafazi